अधुरै रह्याे ५० औं विवाहउत्सव मनाउने चाहना
अधिकारी दम्पत्तीले विवाहको पचास वर्षसम्म वैवाहिक वर्षगाँठ कहिल्यै मनाएनन् । तर यो पटक धुमधामले मनाउने उनीहरुको तयारी थियो ।
स्थानीय सरकार : कुरीति जोगाउँदै
बुढिगंगा नगरपालिका–१ की सदस्य सुर्जा परी वडा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि पनि बिरामी हुँदा ‘देवता’ खोज्न थाल्छिन् । नजिकैका देवताले निको पारेनन् भने उनी अस्पताल जाने होइन, ‘झन् ठूला देवता’ खोज्न थाल्छिन् ।
ओखलढुंगाको मानेभज्याङ गाउँपालिकामा रहेको आठ वटा माध्यमिक विद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार ४५ जना बालवालिकाले भदौ १ पछि बालविवाह गरेका हुन् ।
जन्मिएकै वर्ष आमा गुमाउनु । पाँच वर्षमा बुबा गुमाउनु । श्रमिक भएर बाँच्ने आधार जुटाउनु त उनले भोगेकै थिइन् । अब अर्को बज्रपात उनको भागमा थपियो – विदेशमा श्रीमानको मृत्यु ।
प्रदेशसभा : लैंगिक हिंसा विरुद्ध जुट्दै सांसद महिला
प्रदेश ५ मा ३२ जना महिला सांसद छन् । उनीहरु देख्दा सामान्य नै लाग्छन् । तर, पारिवारिक, सामाजिक र राजनीतिक जीवनमा निकै ठक्कर र हन्डर खाएका छन् । धर्म, संस्कार र परम्पराका नाममा भएका विभेद र विभेदले जन्माएको हिंसा सहेका भुक्तभोगी छन् ।
‘पढ्ने मन छ, फी कसले तिरिदिन्छ ?’
ममता कुमारी कुम्मरले पनि कक्षा ९ मा पढ्दा पढ्दै पढाइ छाडिन् । आमाको मृत्युपछि बुवा मदिरा पिउन थाले । बुवाले काम नगर्ने, पढ्न खर्च नदिने गर्न थालेपछि उनको पढाई कक्षा ९ बाटै रोकियो ।
‘यो पेसा त अर्काको दास बन्ने पेसा पो रहेछ । मलाई यो समाजले हेर्ने नजर के होला ? भोली मलाई कसले विहे गर्ला ? त्यही भएर अनुहार लुकाएर हिँड्छु ।’
द्वन्द्वकालका बलात्कृतहरुको प्रश्न-‘खै न्याय ?’
‘पेटिकोट लगाएर नुहाइरहेकी थिएँ, आर्मी आएर आँखामा पट्टी बाँधेर जबरजस्ती हात तानेर लगे’, उनले भक्कानिदै भनिन्, ‘व्यारेकमा लगेर एउटा सानो कोठामा राखे । छ जना आर्मी थिए, पालैपालो बलात्कार गरे । एउटा पेटिकोटमा ३३ दिनसम्म मलाई त्यहीँ थुनेर राखे ।’
अभियन्ता नै हिंसामा
महिला अधिकारकर्मी हिंसामा परेको उजुरी आए पनि छुट्टाएर राख्ने नगरेको सरकारी निकायहरू बताउँछन् ।